Isgaadhsiinta Ethiopia oo Gabtay Hawsheedii – Rasaasa News
Isgaadhsiinta Ethiopia oo Gabtay Hawsheedii
Feb 14, 2012 Isgaadhsiinta Ethiopia oo Gabtay Hawsheedii
Addis Abab, Feb 13, 2012 [ra] – Sanad ka hor ayey ahayd kolkii ay wakaalada Isgaadhsiinta Ethiopian ay tartan galisay shirkado isgaadhsiineed oo caalamiya, si ay u kordhiso tayada iyo baahida isgaadhsiineed ee guud ahaan dalka Ethiopia.
Tartankaas waxaana ku guulaystay Isgaadhsiinta Faranciiska [france-telecom]. Hal sano ka dibna waxaa fooda iskula jira Ethiopian-telecom iyo France-telecom, ka dib kolkii ay France-telecom ku dhacday wax ka qabashada Isgaadhsiinta dalka.
Waxaa saddex laabmay isticmaalka telefoonka gacanta, ka dib kolkii ay kordhisay Ethiopian telecom tirada numberada telefoonka gacanta. Macaamiil aad u badan ayaa helay numberada telefoonka gacanta, taas oo France-telecom laga filayey in ay iswaafajiso korodhka laymanka iyo numberada.
Ethiopia waxaa haatan ka jira isgaadhsiin xumo saamaysay ganacsiga iyo hawlaha dawlada. waxaa cidhiidhi ah ismaqalka dadka haysta telefoonada gacanta masaafa kasta oo ay isu jiraan.
Waxay dhibaato wayn ka jirtaa isticmaalka telefoonka gacanta iyo Internetka oo ay dadku labadaba lacag ku shubtaan si ay u isticmaalaan. Waxay dadku iibsadaan card ay ku jiraan lacago kala duwan oo lagu isticmaalo telefoonada gacanta iyo Internet-ka.
Waxay Ethiopian tecom, awoodi wayday in ay aqbasho card-ka ay soo saarto ee ay macaamiishu isticmaasho iyo iyada oo hadiiba lagu shubo ayna dadku ismaqli karin.
Dalka Ethiopia oo ka mid ah meelaha ugu isgaadhsiinta qaalisan qaarada Afrika, ayaa hadana ah meelaha ugu isgaadhsiinta xun. Ganacsada ayaa aad uga cabanaysa isgaadhsiin xumada saamaysay ganacsiga, waxayna sheegayaan in ay isticmaalayaan fax intii ay isticmaali lahaayeen Internet.
Madaxda Isgaadhsiinta Ethiopia, ayaa qirtay in ay jirto dhibaato xaga isgaadhsiinta ah, laakiin waxay sheegeen in France-telcom oo maamulka gacanta ku haysa looga fadhiyaa in ay arinta wax ka qabato.
Daawo Shirkii Chatham House ee Jaaliyadaha Somalida ee Ingriiska
Waa Maxay Nabad Galiyo Daro, Maxaase Keena?